Home News Saraakiil lagu dilay Xadka Soomaaliya iyo Kenya
Saraakiil lagu dilay Xadka Soomaaliya iyo Kenya
Maagalada Mandheera ee Gobolka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay qarax ay ku dhaawacmeen afar ka mid ah saraakiisha Booliska Kenya.
Maamulka Gobolka ayaa sheegay in Bam Gacmeed lagu tuuray goob ay ku sugnaayeen saraakiishaas uu ka dhashay khasaaraha afar qof oo dhaawac ah islamarkaana dhamaantood ah saraakiisha Booliska Kenya.
Kutswa Olaka, oo ah Guddoomiyaha Gobolka Mandheera ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay ay baxsadeen Bamka kaddib ciidamada amaankana ay ku baxeen halkii ay u carareen.
Saraakiisha amaanka waxaa ay sheegeen in Saraakiisha xilliga Bamka lagu tuurayay waxaa ay ku guda jireen sugidda amniga Sohdinta Mandheera ay la wadaagto Gobolka Gedo.
Wasiirka amniga gudaha Kenya Fred Matiang’i, ayaa sheegay in inkasta oo wali meelaha qaar amni darrada ka jirto haddana wasaaraddiisa ku guuleysatay in inta badan amniga dalka la xaqiijiyo iyada oo adeegsaneysa hay’adaha kala duwan ee amaanka oo la isku xiray.
Previous articleAskari Soomaali Mareeykan ah oo ku geeryooday Gobolka Minnesota
Next articleBashiir Abuukar Maxamuud oo lagu dilay Koonfur Afrika
Dowladda Qatar oo 1,000 Askari u Tababareeyso Fahad Yaasiin!!
Cabdi Wali Gaas oo Madaxweyne Farmaajo Xasuusiyay In Al Shabaab ay...